3 Ụzọ nyefee Ndi ana-akpo si Samsung ka Samsung
Mgbe ịmafe site na otu agadi Samsung ekwentị ọhụrụ otu, otu n'ime ndị kasị hassles ka unu wee na-enwe bụ otú nyefee kọntaktị site na Samsung ka Samsung ngwaọrụ.
Tupu mgbe ahụ, mgbe ọ bụla smartphones nọ na-mepụtakwara na ọbụna Android adịghị adị, ndị mmadụ na-eji aka tinye kọntaktị ọ bụla otu-site-otu ha ọhụrụ ekwentị tupu erasing ha n'aka ndị okenye otu. Nke a dum usoro na-eji were ọtụtụ awa na n'ihi akwụkwọ ntuziaka aka, ọtụtụ ugboro na kọntaktị e kwukwara ọhụma.
Android kwụsị mmachi na ugbu a ị ike ịnyefe gị niile kọntaktị site na gị otu Samsung ekwentị ọzọ n'ime sekọnd na zuru ezu ziri ezi.
The 3 kacha na ọtụtụ atụ aro ụzọ maka Samsung transfer kọntaktị bụ:
1. Samsung Kpọtụrụ Nyefee site Bluetooth
2. Samsung Kpọtụrụ Nyefee site vCard
3. Nyefee Samsung kọntaktsị na ONE Click na Mobiletrans
A nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu maka onye ọ bụla nke n'elu kwuru banyere ụzọ e nyere n'okpuru:
Ngwọta 1. Samsung Kpọtụrụ Nyefee site Bluetooth
Na usoro a, na gị na okenye ekwentị ị na-chọrọ họrọ niile kọntaktị na ị chọrọ nyefee, na-amalite Bluetooth transfer usoro. The kwesiri ngosi ebe ebe a bụ, tupu na-ebufe kọntaktị site na Bluetooth, na Samsung ekwentị na-ebupụ ha a vCard (.vcf) faịlụ. The .vcf faịlụ a na-ahụ zigara lekwasịrị ekwentị site Bluetooth na kọntaktị na-dị ka ya. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka na-ọrụ mere:
Rịba ama: Samsung Galaxy Cheta 4 mee ihe n'ebe a n'ihi na ngosipụta.
1. Ike on ma gị ochie na ndị ọhụrụ Samsung smartphones.
2. Hụ na ị emewo on Bluetooth ma igwe.
3. Ọzọkwa hụ na ma na igwe na-paired na onye ọ bụla ọzọ n'ihi na ire ụtọ Bluetooth nyefe. N'ịkwado Njikọta, ị nwere ike nyefee a obere faịlụ site na otu nke igwe ọzọ.
4. Na isi iyi Samsung ekwentị site ebe ị chọrọ nyefee kọntaktị, na-emeghe égwu drawer.
5. Site egosipụta oyiyi, ịchọta na enweta Ndi ana-akpo.
6. On Ndi ana-akpo interface, taabụ ma jide ọ bụla nke na kọntaktị site na listi.
7. Mgbe tapped kọntaktị na-ahọrọ, enweta checkbox si n'elu nke mpio iji họrọ niile kọntaktsị na ndepụta.
Rịba ama: Alternatively ị nwekwara ike ịlele checkboxes n'otu n'otu nyefee kọntaktị ahọrọ.
8. Ozugbo chọrọ kọntaktị na-ahọrọ, enweta Share ngosi site n'elu nke window.
9. Site egosipụta nhọrọ, enweta Bluetooth akara ngosi.
10. Site ndepụta nke paired Bluetooth ngwaọrụ, enweta onye nke ị chọrọ agafeta kọntaktị.
oyiyi maka nzọụkwụ 7 oyiyi maka nzọụkwụ 9 oyiyi maka nzọụkwụ 10
11. Na lekwasịrị Samsung ngwaọrụ ebe ị chọrọ nyefee kọntaktị, na-anabata ndị na-abata faịlụ na-echere ruo mgbe nyefe usoro completes ọma.
Ngwọta 2. Samsung Kpọtụrụ Nyefee site vCard (.vcf File)
Usoro a nwere ihe ndị ọzọ nzọụkwụ ka tụnyere aga na usoro ma na nloghachi ọ na-enye gị ihe akara mgbe ọ na-abịa ị na-ahọrọ ebe ngwaọrụ (s). Na Samsung color (N'eziokwu fọrọ nke nta niile Android ntị), e nwere wuru na-Import / Export atụmatụ na-enye gị ohere mbupụ niile kọntaktị gị ka a vCard (.vcf) faịlụ. The vCard faịlụ nwere ike mgbe ahụ ga-agafere ọ bụla Samsung (ma ọ bụ ndị ọzọ Android) ngwaọrụ na kọntaktị na faịlụ nwere ike dị n'ebe n'ime-adịghị. Na .vcf faịlụ kere iji usoro a, faịlụ nwere ike zigara multiple Android na Apple ngwaọrụ na otu kọntaktị nwere ike dị ka ha. Nke a bụ na-enye aka mgbe i nwere otutu ngwaọrụ ma ọ bụ na ị chọrọ otu kọntaktị na-atụkwasịkwara na ekwentị mkpanaaka gị niile ndị òtù ezinụlọ. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro nke exporting na kọntaktị site na a isi iyi mobile na mgbe ahụ importing ha ka ha a lekwasịrị ekwentị na-kọwara n'okpuru:
1. Ike na isi iyi Samsung ekwentị.
3. Site egosipụta ihe oyiyi, na mgbata Ndi ana-akpo.
4. Site Ndi ana-akpo window, enweta More nhọrọ (nhọrọ na atọ vetikal ntụpọ) si n'elu-nri akuku.
5. Site egosipụta menu, mgbata Ntọala.
6. Kpatụ Ndi ana-akpo nhọrọ si Ntọala window.
oyiyi maka Nzọụkwụ 3 oyiyi maka nzọụkwụ 5 oyiyi maka Nzọụkwụ 6
7. Site ọzọ interface, enweta Import / Export kọntaktị nhọrọ.
8. Ozugbo Import / Export kọntaktị igbe Pop elu, enweta Mbupụ na ngwaọrụ nchekwa nhọrọ.
9. Na Kwenye bupu igbe, rịba ama ala ma ọ bụ n'isi ebe ebe ebe vCard faịlụ ga-echekwara mgbe a site na enweta OK.
oyiyi maka nzọụkwụ 7 oyiyi maka nzọụkwụ 8 oyiyi maka nzọụkwụ 9
11. Ozugbo mere, gaa na faịlụ si zọpụta ọnọdụ na nyefee .vcf faịlụ ka lekwasịrị Samsung ngwaọrụ eji ihe ọ bụla nke gị họọrọ ụzọ nyefee (eg site Bluetooth, NFC (adịghị na niile Samsung ntị), ma ọ bụ iji a PC dị ka a Central ngwaọrụ).
12. Mgbe .vcf faịlụ a kpọfere lekwasịrị Samsung ekwentị, na iche na ekwentị onwe ya, na-eso n'elu nzọụkwụ site 1 8 mgbe ị na-ahọrọ Import si ngwaọrụ nchekwa nhọrọ mgbe on nzọụkwụ 8.
13. Na Save kọntaktị na igbe, mgbata Ngwaọrụ.
14. Na-egosipụta Họrọ vCard faịlụ igbe, jide n'aka na Import vCard faịlụ bọtịnụ redio na-ahọrọ na enweta OK.
15. Site ọzọ igbe, enweta iji họrọ bọtịnụ redio na-anọchi anya vCard faịlụ na ị dị nnọọ kpọfere ọhụrụ a smartphone.
16. Kpatụ OK na-amalite importing kọntaktị.
oyiyi maka nzọụkwụ 13 oyiyi maka nzọụkwụ 14 oyiyi maka nzọụkwụ 16
17. Mgbe kọntaktị e dị, ị nwere ike ihichapu ha si gị okenye na ekwentị na ike ịmalite iji gị ọhụrụ ekwentị kwesịrị.
Solutoin 3. Nyefee Ndi ana-akpo site Wondershare MobileTrans
Ọ bụ ezie na a na-akwụ ụgwọ software, Wondershare MobileTrans na-eme ka kọntaktị enyefe ezigbo mfe na n'ụzọ kwụ ọtọ. Mgbe iji Wondershare MobileTrans, unu niile kwesịrị ime ka nyefee kọntaktị site na gị ochie ekwentị ndị ọhụrụ na otu onye bụ jikọọ ma ndị igwe ka PC, igba egbe Wondershare MobileTrans ma nyefee ndị chọrọ akpọkwa ndị ọhụrụ na ekwentị. MobileTrans-Enye gị ohere n'ụzọ zuru ezu ihichapu ochie data si ebe ekwentị tupu ebufe kọntaktị na ya. Nke a nwere ike mere site ịlele otu checkbox. The nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ntụziaka nyefee kọntaktị site na gị ochie Samsung ekwentị ọhụrụ otu na-nyere n'okpuru:
Rịba ama: Samsung Galaxy Cheta 4 na Samsung Galaxy Tab (gt N8000) na-eji ebe a dị ka isi iyi na ebe ngwaọrụ karị maka ngosipụta.
1. Abanye na gị na Windows PC na ihe ọ bụla nchịkwa na akaụntụ.
2. Mepee ọ bụla nchọgharị weebụ gị oke na-aga http://www.wondershare.com/phone-transfer/.
3. Download kwesịrị ekwesị mbipụta nke Wondershare MobileTrans dị ka kwa n'elu ikpo okwu nke ugbu a sistemụ na ị na-eji.
4. Mgbe nbudata, jiri nkịtị usoro iji wụnye omume na kọmputa gị.
5. Ozugbo arụnyere ịga nke ọma, igba egbe Wondershare MobileTrans site abụọ-ịpị ya shortcut ngosi site na desktọọpụ.
6. Site mbụ interface, pịa na ekwentị ekwentị Nyefee nhọrọ si ekpe ngalaba.
7. Ozugbo ọzọ window abịa, jikọọ gị ochie na ndị ọhụrụ Samsung igwe ka PC eji ha kwekọrọ ekwekọ data cables.
8. Chere ruo mgbe Wondershare MobileTrans na-achọpụta rụọ ejikọrọ igwe.
9. Tulee ma gị isi na iche igwe na-enịm n'okpuru Isi Iyi na Destination edemede karị. Ọ bụrụ na ha na-adịghị, ị nwere ike pịa tụgharịa button si center ebe ahụ igwe na ha ziri ezi edemede.
10. Ozugbo mere, site na ndepụta nke ọdịnaya ugbu a na n'etiti ngalaba nke interface, pịa iji họrọ Ndi ana-akpo.
11. N'ikpeazụ pịa Malite oyiri button na-amalite na kọntaktị transfer usoro.
Rịba ama: Optionally, ị nwere ike pịa Doro Anya data tupu oyiri checkbox na ala nke Destination ngalaba, na pịa Kwenye button si Doro Anya ekwentị data nkwenye igbe iji kwe ka Wondershare MobileTrans ihichapu data si lekwasịrị ekwentị tupu edegharị ọhụrụ data na ya.
12. Chere ruo kọntaktị na-agafere ọhụrụ na ekwentị na ozugbo usoro completes, ị nwere ike Ikwupu igwe na-amalite iji ha kwesịrị.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ iji nyefee gị kọntaktị site na otu Samsung smartphone ọzọ, 3 ụzọ kọwara n'elu bụ mfe na ndị na-kacha na-atụ aro maka n'ụlọ ọrụ na professionals.S
2 Ụzọ na-etinye Music on Samsung Galaxy I7500
> Resource> Samsung> 3 Ụzọ nyefee Ndi ana-akpo si Samsung ka Samsung